Tosidra ambony : mihamaro ny tanora tapaka lalandra | NewsMada
Tosidra ambony : mihamaro ny tanora tapaka lalandra
Mila tsapaina matetika ny tosidra. Anisan’ny mitarika amin’ny fahatapahan’ny lalandra ny fananana tosidra ambony. Betsaka ireo tratran’izany ao amin’ny ivontoerana USIC ao amin’ny Befeletanana. Nohavaozina izany ka nanotrona ny hetsika ny reny mpiahy ny fahasalamana.
Mihatanora (17-19 taona) ny olona manana tosidra ambony amin’izao fotoana izao. Misy amin’ireo latsaky ny 40 taona tratran’ny fahatapahan’ny lalandra ao amin’ny loha, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny ivontoerana andraisana ny marary mila fitsaboana mavesatra (USIC) ao amin’ny sampana momba ny fitsaboana ny aretin’ny fo sy ny lalandra ao amin’ny hopitaly Befeletanana, Pr Rakotoarimanana Solofonirina, omaly. Antony voalohany mitarika izany ny fananana tosidra ambony, ka tokony hotsaboina avy hatrany raha vao mahatratra 14,9 ny haavon’ny tosidra. Miteraka voka-dratsy amin’ny fo sy lalandra ny tosidra ambony. Reraka ny fo, tsentsina ny lalandra ary ny 95%-n’ny olona raisina an-tanana ao amin’ny USIC tratran’izany avokoa.
Nampihena ho 5,11% ny taham-pahafatesana vokatry ny aretin’ny fo sy ny lalandra ny fisian’ny USIC napetraka ny taona 2016. Nohavaozina ny ivontoerana niaraka amin’ny orinasa Jovenna sy Gemur nanomboka ny volana desambra lasa teo. Mitentina 150 tapitrisa Ar ny asa fanatsarana rehetra. Nampitaovana ny toeram-pivoriana kosa ny vadin’ny filoha.
Notokanana, omaly, koa ny lalana mampitohy ny rihana efatra ao amin’ny toeram-piterahana Befelatanana. Niarahana amin’ny masoivoho japoney eto amintsika ny tetikasa miteti-bidy 572 tapitrisa Ar.